आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्तो अपराध के हुन्छ ? – News543Online
आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्तो अपराध के हुन्छ ?
May 27, 2021 adminLeaveaComment on आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्तो अपराध के हुन्छ ?
काठमाडौं । ‘माधव नेपालले गर्नै नहुने काम गर्नुभयो, इतिहासमा उहाँले गरेको काम सबैभन्दा ठूलो भूल हुने छ’, नेकपा एमालेकी युवा नेतृ नवीना लामा भन्नुहुन्छ ।
विघठित प्रतिनिधि समा सदस्य समेत रहुनुभएकी लामाले माधव नेपालले माओवादी र कांग्रेसको पछाडि लागेर पार्टी ध्वस्त पारेको बताउनुभयो । ‘आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदाहुँदै विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने जस्तो अपराध के हुन सक्छ ?’, सनराइज खबरसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
भोलि केपी ओली हुने सम्भावना बोकेका योगेश भट्टराई जस्ता नेताले यस विषयमा अझै सोच्नु पर्ने उहाँको सुझाव छ । ‘उहाँहरुले शेरबहादरको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेर ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ, उहाँ जस्ता नेताको कारण पार्टी एकता अझै जोगिन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ, नेताहरु अझै बसेर छलफल गर्नुपर्छ’, नवीनाले भन्नुभयो ।
जनताको प्यारो चिन्ह सूर्य चिन्ह नै एकोले धेरै नेता चुनावसम्म एमालेमा नै आइसक्ने उहाँको विष्लेषण छ । ‘यसको लागि नेताहरुले आआफ्ना अडान त्याग्नु पर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
माधव नेपाल र भीम रावल जस्ताको चरित्रले भने पार्टी एक हुन नसक्ने उहाँको तर्क छ । ‘उहाँहरुले बादललाई हराएर पार्टीमा अपराध गर्नुभएको छ, एकताको नाममा पार्टीमा अन्तरघात गर्नु भन्दा आ–आफ्नै बाटो लागेको राम्रो हो, कि सबै कुराको समिक्षा गर्दै अब यस्तो कुरा नगर्ने भनेर आउनु पर्छ, कि अलग बाटो रोज्नु पर्छ, जनता र कार्यकर्तालाई भ्रममा राख्ने भन्दा क्लियर भएकै राम्रो’, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले गरेको चुनाव घोषणाको स्वागत गर्दै उहाँले जनमतमा जाने कुरा आफैमा राम्रो भएको बताउनुभयो । अब चुनाव अघि सबैको ध्यान कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘कोभिड नियन्त्रण गरेर चुनावमा जानुपर्छ’, लामाले भन्नुभयो ।
कोभिड हुन नदिन र भए पनि क्षति हुन नदिने उपाय भनेको भ्याक्सिन नै भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘अब भ्याक्सिन ल्याउने र लाउने तिर ध्यान जानु पर्छ, चुनाव अघि कम्तीमा १ करोड नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाऊँ, त्यस पछि चुनाव गराउनुपर्छ’, नवीनाले भन्नुभयो ।